戒 - Wikipedia
Ny dikan'ny 戒 anatin'ny fiteny maro
Amin'ny ankapobeny, ny fiteny kantoney dia teny tenenina fa tsy teny soratana. Ny fiteny kantoney tenenina dia samihafa amin'ny fiteny sinoa soratana ankehitriny, endrika soratana an'ny fiteny mandarina tsotra. Ny feo avoakan'ny fiteny sinoa koa dia samihafa be sady lavitra amin'ny feo avoakan'ny fiteny kantoney. Amin'ny fotoana mandeha, nilaina no nahazo teny tenenina mirindra amin'ny fiteny soratana. Noho izany dia mampiasa sinograma manokana ho an'ny fiteny kantoney. Maro amin'ny sinograma Kantoney no tsy manana sanda mitovy amin'ny mandarina. Tsy azon'ny tsy mpiteny kantoney ny fiteny kantoney, na dia kantoney soratana aza, satria izy mampiasa fitsipi-pitenenana sy volana tsy mitovy amin'ny mpiteny mandarina. Ny fanononana ity sinograma ity amin'ny teny kantoney dia gaai3
eumhun : 경계할 계
Hita tao amin'ny "http://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=戒&oldid=59924"	Sokajy : KanjiHanzi sinoaHanja koreana	Menu de navigation
Voaova farany tamin'ny 4 Jiona 2010 amin'ny 13:29 ity pejy ity